Waqtiga Marmaray iyo Khariidadda Marmaray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaqtiga Dalxiisyada Marmaray iyo Khariidadda Marmaray
04 / 08 / 2019 34 Istanbul, DUNIDA, tareenka, GUUD, Nidaamka Tareenka fudud (HRS), Headline, TURKEY, VIDEO
Waqtiga Safarka ee Marmaray: Dhismaha mashruuca Marmaray, oo isku xiri doona labada jid ee isku xirta Bosphorus, si xawli ah ayuu usocdaa. Khadadka tareenka ayaa midba midka kale ku xirnaan doonaa iyada oo lagu xirayo isku-xirka tareenka ee hoos yimaada Bosphorus. Safarada Marmaray iyo Kharashaadka Marmaray oo leh macluumaad faahfaahsan oo adiga kugu saabsan. Qaybta tigidhada ee Marmaray, waxaad ka heli kartaa qiimaha tigidhada hadda jira.
Khadka ayaa ku geyn doona dhulka hoostiisa ee Kazlıçeşme; saldhigyada cusub ee saldhigga cusub, Yenikapı iyo Sirkeci, waxay ku sii gudbi doonaan Bosphorus, waxaana lagu xiri doonaa xarun kale oo cusub oo dhulka hoostiisa ah, Üsküdar, waxayna dib ugu soo noqonaysaa Söğütlüçeşme.
Mashruuca Marmaray waxaa loo maleynayaa inuu saameyn ku leeyahay taraafikada mashquulka ah ee Bosphorus ee Istanbul. Dadku waxay door bidaan in ay si dhaqso ah uga soo gudbaan Bosphorus iyaga oo wata gaadiidkooda.
Su'aasha ugu weyn ee maskaxda ee rakaabka doonaya in ay ka gudbaan Bosphorus Marmaray waa goorma xijiyada Marmaray u shaqeynayaan?
Jawaabta su’aashan ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo wax yar ka hor bilowga mashruuca Marmaray. Mashruuca Marmaray 29 ayaa la rajaynayaa inuu furmo Oktoobar 2013. Markaad sharraxaad ka bixiso saacadaha duullimaadka Marmaray, saacadaha shaqada, iyo saacadaha dhaqdhaqaaqa, waxaan kuugu soo bandhigi doonaa saacadaha duullimaadyada Marmaray websaydhka:
Marmaray iyo Gebze iyo Halkalı wuxuu noqon doonaa daqiiqado 105.
Waxaa jiri doona daqiiqado 37 inta u dhaxeysa Marmaray iyo Bostanci iyo Bakirkoy.
Marmaray iyo Söğütlüçeşme iyo Yenikapı ayaa noqon doona daqiiqado 12.
Inta u dhaxeysa Marmaray iyo Üsküdar iyo Sirkeci waxay noqon doonaan daqiiqado 4.
Marmaray joojinta waxaa loo isticmaali doonaa isla jihada laga soo qaado Gebze ilaa isha Söğütlü. Gawaarida tareenada ee cusbooneysiiyay iyo dayactirka iyo ceelka banaan ee dadka isticmaala Marmaray Sogutlucesme oo ka yimid Uskudar, ka dibna dhinaca Yurub ayaa ka gudbi doona.
Halkalı - Xargaha Gebze Marmaray Stations
Waxay leedahay jidka weyn ee ugu dheer magaalada Istanbul Halkalı - Waxaa jira isugeyn joogsiyo ah 42 joogsiga khadka metro Gebze. Joojintaas, 14 wuxuu ku yaal dhinaca Yurub, halka 28 harsan uu ku yaal dhinaca Anatolian. Saldhigyada Marmaray waa sida soo socota:
Khariidadaha Nidaamka Tareenka ee Magaalada Istanbul (pdf)
iibsan tikidhada marmaray
Lacagta ugu yar ee koorsadan waxay ansax noqon doontaa laga bilaabo 13.03.2019
Qiimaha Tigidhada oo buuxa: £ 2,60
Qiimaha tigidhada la dhimay: 1,25 TL / 1,85 TL
Lacag Koorso buuxda ah
Qiimaha Tigidhada oo buuxa: £ 5,70
Qiimaha tigidhada la dhimay: 2,75 TL / 4,0 TL